परिवार नियोजनको जिल्ला सभा
चितवन, २० चैत । नेपाल परिवार नियोजन संघ जिल्ला शाखा चितवनको ३७ औं सभा शनिबार भरतपुरमा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलय चितवनका प्रमुख विजयकुमार झाले माग अनुसार २१ देखि २५ प्रतिशत परिवार नियोजनको साधन पु¥याउन नसकिएको बताए । संघका जिल्ला सभापति रामहरि न्यौपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा संघकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष सपना अधिकारी थापा प्रमुख अतिथि रहेकी थिइन् ।
माओवादी केन्द्र संगठन निर्माणमा
चितवन २० चैत । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले जिल्लाव्यापीरुपमा संगठन निर्माण र पुनर्गठन जारी राखेको छ ।
पार्टी जिल्ला कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार, शनिबारमात्र आधा दर्जनभन्दा बढी वडामा नेतृत्व चयन र आगामी निर्वाचनका बारेमा अन्तरक्रिया गरिएका छन् ।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २५ को भेलाले तुलाराम आचार्यको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय समिति निर्माण गरेको नवनिर्वाचित सचिव नरेन्द्र दवाडीले जानकारी दिए । माओवादी केन्द्रका अनुशासन विभाग प्रमुख अमिक शेरचन प्रमुख अतिथि रहेको उक्त भेलाले रामप्रसाद ढुंगाना र कमल अधिकारी उपाध्यक्षमा, कृष्णप्रसाद सञ्जेल कोषाध्यक्षमा र नारायण सुवेदी सहसचिवमा निर्विरोध निर्वाचित गराएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १० मा वाईसीएल, बुद्धिजीवी र महिलाका भेलाहरु सम्पन्न भएका छन् । वडा अध्यक्ष विश्व ओझाले दिएको जानकारी अनुसार, टिकाराम पोखरेलेको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय नेपाल राष्टिय बुद्धिजीवी संगठन गठन भएको छ । डम्बरकुमारी पोखरेलको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय अनेमसंघ (क्रान्तिकारी)को इकाई बनेको छ । दिपेन्द्र पण्डित इन्चार्ज रहने गरी ४० सदस्यीय वाईसीएल इकाई निर्माण भएको छ ।
माओवादी केन्द्रले शनिबार नै रत्ननगर नगरपालिकाको वडा नम्बर ३, कालिका नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र ३ मा समेत नयाँ समिति निर्माण गरेको छ ।
मिस्टर चितवनमा अठार प्रतियोगी
चितवन,२० चैत । अवतार इन्टरनेशनलको आयोजनामा भैरहेको मिस्टर चितवनको शनिबार भएको दोस्रो अडिसनबाट १० जना प्रतियोगी छनौट भएका छन् ।
पहिलो अडिसनबाट आठ जना प्रतियोगी छानिएका थिए । अब मिस्टर चितवनमा प्रतियोगी संख्या १८ पुगेको छ । प्रतियोगितामा मिस्टर नेपाल २०१५ सन्दिप पोखरेल, कार्यक्रम संयोजक प्रज्ञा तिवारी, मञ्जरी ग्रुपका अध्यक्ष विशाल एच आले र सञ्चारकर्मी राकेश तिमिल्सिना निर्णायक रहेका छन् ।
लायन्स र लियोको स्वास्थ्य शिविर
चितवन, २० चैत । लायन्स क्लब अफ नारायणगढ चित्रवन र लियो क्लब अफ नारायणगढ चित्रवनको संयुक्त आयोजनामा शनिबार माडीमा बृहद निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर गरिएको छ ।
अयोध्यापुरी उपस्वास्थ्य चौकी परिसरमा भएको शिविरमा एक सय ५० जना बिरामीले स्वास्थ्य जाँच गराएका छन् । शिविरमा वरिष्ठ हाडजोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डा. गौरव न्यौपाने, भरतपुर अस्पतालका डा. महेन्द्र अग्रहरी, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेष डा. वन्दना खनाल, बालरोग विशेषज्ञ डा. निश्चल मास्के, डा. दीक्षा पोखरेलले बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गरेका थिए ।
माडीमा ठूला अस्पताल नहुँदा उपस्वास्थ्य चौकीको भरमा चेकजाँच गर्नुपर्ने बाध्यता भएपछि स्थानीयलाई आफ्नै ठाउँमा सहज उपचार होस् भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य शिविर राखिएको कार्यक्रम संयोजक लियो क्लब अफ नारायणगढ चित्रवनका अध्यक्ष विकास पाण्डेले बताए ।
निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गर्न जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय भरतपुर, मनकामना अस्पताल भरतपुर, अयोध्यापुरी उपस्वास्थ्य चौकी माडी, लायन्स क्लब अफ माडी र लियो क्लब अफ नारायणगढले सहयोगी संस्थाको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
अयोध्यापुरी प्राविका प्राध्यापक कृष्णप्रसाद अधिकारी प्रमुख अतिथि रहेको शिविर लायन्स क्लब अफ नारायणगढ चित्रवनका अध्यक्ष हरिराज भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
भरतपुर तीनमा पाण्डे
भरतपुर, २० चैत । नेकपा माओवादी केन्द्रको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ३ को पार्टी एकता भेला शनिबार सम्पन्न भएको छ ।
शोभाखर चापागाईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भेलाले खेमराज पाण्डेको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय वडा कमिटी गठन गरेको छ । कमिटीको उपाध्यक्षमा लक्ष्मण श्रेष्ठ, सचिवमा भोजराज काफ्ले, सहसचिवमा रामकृष्ण अर्याल र कोषाध्यक्षमा मञ्जु भट्ट पाण्डे रहेका छन् ।
वडा भेलाको पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य एवम् प्रमुख अतिथि नारायण दाहालले उद्घाटन गरेका थिए । उक्त अवसरमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य घनश्याम दाहाल, यमबहादुर परियार, बाबुराम खरेल, इश्वरीप्रसाद सापकोटा, इश्वर रेग्मी, राजेन्द्र चापागाईलगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
भरतपुर लियोमा भुजेल
चितवन, २० चैत । लियो क्लब अफ भरतपुरको वर्ष २०१७÷१८ को अध्यक्षमा अनुप भुजेल चयन भएका छन् ।
भरतपुरमा शनिबार भएको अधिवेशनले भुजेलको अध्यक्षतामा सर्वसम्मत रुपमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । क्लबको प्रथम उपाध्यक्षमा विकास कार्की, द्वितीय उपाध्यक्षमा रविन्द्र शर्मा र तृतीय उपाध्यक्ष सुदिप सिग्देल चयन भएका छन् ।
यसैगरी सचिवमा रविन अर्याल, सहसचिवमा प्रवेश आचार्य, कोषाध्यक्षमा उषा लामिछाने, सहकोषाध्यक्षमा आशीष कँडेल, मेम्बरसिप डाइरेक्टरमा सुदर्शन राउत, टेमरमा उद्गम पौडेल, टेलट्वीस्टरमा सुरज रेग्मी, पिआरओमा निश्चल कँडेल चयन भएका छन् ।
लायन्स क्लब अफ भरतपुरका संस्थापक अध्यक्ष दीपक राना प्रमुख अतिथि रहेको अधिवेशन क्लबका अध्यक्ष प्रजिल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
भरतपुर, २० चैत । नेकपा एमाले भरतपुर ९ ले शनिबार घरदैलो कार्यक्रमको औपचारिक समापन गरेको छ ।
पार्टी केन्द्रको परिपत्र र जिल्लाको निर्देशनमा फागुन २० गतेबाट सुरु भएको अभियान चैत ७ गतेसम्म परिचालित थियो । वडा अध्यक्ष लीलावल्लभ भुसालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ रहेका थिए ।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य देवी ज्ञवाली, पार्टी जिल्ला अध्यक्ष कृष्णभक्त पोखरेल, प्रदेश नं. ३ का सदस्य विजय सुवेदी, जिल्ला उपाध्यक्ष तेजेन्द्रबहादुर खड्का, जिल्ला सदस्य विजय विक, क्षेत्रीय अध्यक्ष बच्चुराम भट्टराई लगायतले बोलेका थिए ।
सोही अवसरमा झननाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय नेपाल राष्ट्रिय भूपू सैनिक तथा प्रहरी महासंघ, अशोकचन्द्र उपाध्याय न्यौपानेको अध्यक्षतामा ३५ सदस्यीय युवा संघ, सीता तिवारीको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय अनेमसंघ र मानबहादुर विकको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय मुक्ति समाज भरतपुर ९ का वडा कमिटीहरु गठन गरिएको छ ।
मोबाइल बैंकिङको सुरु
गैँडाकोट, २० चैत । गैंडाकोट स्वाभिमान साकोसले शनिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी एसएमएस तथा मोबाइल बैंकिङ सुरु गरेको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष धनबहादुर पौडेलको अध्यक्षतमा सम्पन्न कार्यक्रममा सचिव कूलप्रसाद पाण्डे, प्रथम उपाध्यक्ष पोषणराज सुवेदी, उपाध्यक्ष देवराज पौडेल, ब्यवस्थापक रामचन्द्र सुवेदीले बोलेका थिए । कार्यक्रममा सहकारी समन्वय मञ्चका अध्यक्ष वेदप्रसाद गौडेल, संस्थापक अध्यक्ष गोविन्द सुवेदी लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
२०५० सालमा स्थापना भएको संस्थामा सदस्य संख्या छ हजार तीन सय जना र कुल पुँजी ५० करोड रहेको छ । दुई वटा सेवा केन्द्र र मुख्य कार्यालयबाट संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
रत्ननगर, २० चैत । केराखेतीको विकास प्रवद्र्धनमा पत्रकारितामार्फत महत्वपूर्ण योगदान गरेको भन्दै शनिबार चितवनको रत्ननगरमा तीन जना पत्रकार सम्मानित भएका छन् ।
रासस चितवनका नारायण ढुंगाना, कान्तिपुर टिभीका नवराज मिश्र र कायाकैरन दैनिकका ध्रुव खनाललाई सम्मान गरिएको हो । चितवन केरा उत्पादक संघको तेस्रो वार्षिक साधारणसभाका क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रभु बुढाथोकीले उनीहरुलाई कदरपत्रसहित सम्मान गरेका थिए ।
डा. बुढाथोकीले चितवनमा केराखेतीका प्रशस्त सम्भावना रहेको औंल्याउँदै अब किसानहरु कृषि औद्योगिकीकरणतर्फ जानुपर्ने सुझाव दिए । राम्रा खेतीयोग्य जमिनलाई जोगाउँदै कृषि पर्यटनको विकास गर्नु अर्काे सम्भावनाको विषय भएको उनले औंल्याए ।
कार्यक्रममा चितवन केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्त, निवर्तमान अध्यक्ष यज्ञप्रसाद सुवेदी लगायतले भारतीय केराका कारण समस्या परेको बताए । केराखेतीको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने किसानहरुलाई पनि कार्यक्रममा सम्मान गरिएको थियो । चितवनमा दुई हजार छ सय २० बिघामा केराखेती भएको छ । छ सयभन्दा बढी किसान केराखेतीमा संलग्न छन् ।